नेकपा मिल्ने सम्भावना कति ? यस्तो छ प्रक्ष्येपण ! « Ok Janata Newsportal
नेकपा मिल्ने सम्भावना कति ? यस्तो छ प्रक्ष्येपण !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यतिबेला विभाजनमा छ । दुई पक्ष– दाहाल–नेपाल र ओली पक्ष । अहिले दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई कटु आलोचना गरिरहेका छन् । ओली पक्षका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले व्यक्ति केन्द्रीत आलोचनामा उत्रिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अहिलेको मन्तव्य सुन्दा कसैलाई भित्तामा पु¥याउने गरी भन्ने र त्यसपछि म त्यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहान्न जस्ता शब्दको प्रयोग भइरहेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षलाई ओलीले गरेका कटाक्षको प्रतिउत्तर फर्काउन ठिक्क छ । यसरी जुहारी चलिरहेका बेला केही पंक्तिले भने अझै पार्टी मिल्ने संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘मिल्नु त छँदैछ, कतिसम्म टाउको फुटेपछि मिल्ने भन्ने हो ।’
नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले भनेका छन्, ‘पार्टीमा केही समयपछि मिल्नु नै पर्छ किन यति धेरै कटाक्ष गर्नु, एकले अर्कोका पोल खोलेर संसार लज्जित नपारौँ ।’
यता बामदेव गौतमपनि पार्टी एकताका लागि भन्दै अलग धारमा उभिएका छन् । तर बामदेवप्रति धेरै नेता कार्यकर्ताको विश्वास छैन । बामदेवले एकताको बाटो अबलम्बन गरेका हुन् वा आफ्नै दुनो सोझ्याउन तर्फ लागेका हुन्, एक नेकपा नेताले भने ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य भने पार्टी मिल्ने दिशामा नभइ टुक्रा–टुक्रा हुनेगरी फुटको दिशामा गएको बताउँछिन् । पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजानका निम्ति नभइ प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकारले सिंगो कम्युनिष्टको इतिहासमा दाग लाग्ने शाक्यको तर्क छ ।
अष्टलक्ष्मी भन्छिन्, ‘प्रधानमन्त्रीको आयु धेरै छैन, उनी निभ्न लागेको बत्ति हुन् बत्ति निभ्दा अलि बेसी उज्यालो दिन्छ । उनी त मर्छन् नै तर कम्युनिष्टमा कलंक लगाएर जाने भए ।’
नेकपाका दुई पक्ष अलग–अलग निर्वाचनमा जानका लागि समेत डराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही समयका लागि आफू शासक हुने रहर मात्रै हो । अन्नतः उनी नेकपालाई मिलाएर निर्वाचनमा जान चाहान्छन्, एक राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद् बिस्तारबारे यस्तो आयो निष्कर्ष
एमालेका नेता कार्यकर्तालाई तलब